"Waa Saxeexa Ugu Xun Taariikhdeena" - Jamaahiirta Man United Oo Dhulka La Galay Mid Kamida Ciyaartoyda Kooxdooda Kaddib Ceebtii Kulankii Newcastle United. - Gool24.Net
“Waa Saxeexa Ugu Xun Taariikhdeena” – Jamaahiirta Man United Oo Dhulka La Galay Mid Kamida Ciyaartoyda Kooxdooda Kaddib Ceebtii Kulankii Newcastle United.
October 7, 2019 Apdihakem Omer Adem
Jamaahiirta kooxda Manchester United ayaa barta Twitter-ka ku jeex-jeexay khadka dhexe ee kooxdooda ee Fred kaddib kulankii ay xalay guuldarrada ceebta ah kala soo kulmeen kooxda Newcastle United oo qudheedu qaab aad u xun ku jirtay.
Xiddiga ree Brazil ayaa kulankii St James Park kusoo bilawday markiisii ugu horreysay xilli ciyaareedkan kulamada horyaalka balse tababare Ole Gunnar Solskjaer ayuusan marnaba u muujinin sabab uu kulamada xiga u aamino.
Fred ayaa ahaa ciyaartoyga ugu taabashada badan kubadda xiddigaha Manchester marka laga reebo Harry Maguire iyo Ashley Young balse waxa uu gabi ahaanba ku fashilmay inuu hal baas oo fure ah sameeyo.
Fred ayaan isku dayin hal mar inuu ciyaartoy Newcastle ah kubadda la dhaafo waxaana uu ceeb weyn dhexda ka galay markii uu ku fashilmay inuu qabsado baas fudud oo uga yimid Andreas Perriera xilli ay goolka bar-bardhaca raadinayeen.
Si kastaba, Saxeexan 52-ka Milyan ugu qiimaysan Man United ayay si weyn u eedeeyeen jamaahiirta kooxdaas kuwaas oo u hanweynaa xilli ciyaareedkan horraantiisiina ku baaqayay in fursad uu isku muujiyo la siiyo.
Waxaanu halkan hoose idinkula wadaagi doonaa qaar kamida jamaahiirta Red Devils ee barta Twitter-ka kaga hadlay hanaankii ciyaareed ee Fred iyadoo qaarkood ay u arkaan saxeexooda ugu xun taariikhda.
Taageeraha koowaad ayaa yidhi “Fred waa saxeexa ugu xun taariikhdeena, 50-60 Milyan ayaynu ku bixinay khad dhexe oo fulay ah kaas oo ka baqaya inuu kubadda hore u baaso oo aan kubadda shuudi karayn, Waa qas, Waxaan isku dayay inaan taageero laakiin isagu ma caawinayo naftiisa”.
Taageerahaha labaad ayaa yidhi “Fred aad ayuu u xun yahay, Xaqiiqdii aad ayuu u xun yahay”.
“Dhab ahaantii siduu wali Fred ugu ciyaarayaa maaliyad Utd ah, 60 Milyan oo u dhigma 1 Pound Sterling, Kani waa safkii ugu xumaa ee aan arkay 28-kayga sano” Ayuu raaciyay taageere saddexaad.
Taageeraha afraad ayaa isna yidhi “Qof ma i xasuusin karaa sababta aynu 50 Milyan ugu bixinay Fred?”